Njem aka Equatorial Guinea | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Afrika, Ihe ị ga-ahụ
Enwere naanị mba abụọ n’Africa nwere Spanish dịka asụsụ gọọmentị ha na otu n’ime ha bụ Equatorial Guinea. N'ụzọ doro anya, ọ bụ ógbè ndị Spain, ya mere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke ndị bi na ya na-achịkwa ya. You na-amasị gị echiche nke ịga Africa na chọpụtara na ebe nlegharị anya nke obere obodo a?
Equatorial Guinea na-enye anyị a ọdịdị dị egwu, oke osimiri na Indiana Jones, ọhịa na colonial mkpọmkpọ ebe ebe niile. Ọ ka bụ ihe omimi, ịbụ obodo amachaghị na obere ileta, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ọchichọ nke nchọta ...
2 Travelga Equatorial Guinea
Ọ dị na Ọwara Oké Osimiri Guinea, na nso nso, n'ihi ya kwa aha ya. Dị ka Africa n'ozuzu ya, ala ndị ahụ nwere agbụrụ dị iche iche mejupụtara alaeze. Otu ụbọchị ndị Portuguese bịarutere wee malite ịzụ ndị ohu, mana obere oge ala ndị ahụ ghọrọ akụkụ nke ókèala Spanish nke Viceroyalty of the Río de la Plata, nke dị na South America. N'ezie, njem nke were ndị ọchịchị hapụrụ Montevideo.
Iji kwughachi ọnụnọ Spanish, emesịa, usoro eze kpọrọ ndị ojii na ndị mulattoes bi na Cuba ka ha gaa ebe a (ma ọ bụrụ na enweghị ndị ọrụ afọ ofufo, mgbe ahụ n'ike), mpaghara nke, na mgbakwunye na esemokwu dị n'etiti ikike, nwere ya nwee nsogbu dị n'ime. Mana eziokwu bụ na enweghị ụdị mwekota, na dịka ọ dị n'ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke kọntinent ahụ, ógbè ahụ biri n'okpuru usoro ịkpa ókè agbụrụ.
Ugbua na narị afọ nke iri abụọ, esemokwu malitere ọzọ, na '50s,' 60s ha ghọrọ ókèala ofesi, mgbe ahụ, mpaghara kwụụrụ onwe ya ndien ke akpatre ke 1968 Spain, ke idak akwa mfịghe, ama ọnọ unyịme nnwere onwe. Mgbe ahụ ọchịchị aka ike, nrigbu mmanụ (bụ mba nke atọ na-emepụta mmanụ agbịdị na mpaghara Sahara Africa) na mkpesa sitere n'aka òtù ndị na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ.
Ruo ugbu a, nkenke, akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ. Ugbu a, Kedu ihe bụ ọdịdị ala nke Equatorial Guinea? Ọfọn, ọ dị obere, naanị puku kilomita iri abụọ na isii. Ọ dị nso na Gabon, Cameroon na Atlantic. O nwere agwaetiti ụfọdụ, nke nke kachasị mkpa bụ agwaetiti Bioko, 26 kilomita site n'ụsọ oké osimiri na gulf. Ọ bụ agwaetiti mgbawa ugwu, osisi, okwute ma na-eme nri nke ọma maka koko na-eto eto. Agaghị ebi n’agwaetiti ndị ọzọ.
Dị ka o kwesịrị ịdị, na Equatorial Guinea ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Ọnọdụ okpomọkụ dị 25 ºC ma nwee oge mmiri ozuzo. Ihu igwe a emeela ka mmepe nke ọdịdị na-emesapụ aka bụ ihe kachasị mma n'akụkụ ebe a. N’agbata Juun na onwa Ogugu bu oge udu mmiri n’elu ala, site n’onwa Disemba rue February bu Bioko Island bukwa mmiri ma obu mmiri nwere ike izokwara oge obula, site na November rue February bu oge di nma ihu mbe.
Ga-ama ihe ahụ ọ bụ mba nwere ọtụtụ nsogbu ịgagharị: enweghị ụgbọ olokoNaanị okporo ụzọ na okporo ụzọ, enwere ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ elu na ụgbọ elu ndị kwụ n’agbata Madrid na isi obodo, Malabo. Ọnọdụ okporo ụzọ ahụ dị mma ma enwere ụfọdụ ụzọ okporo ụzọ. Gbazite ụgbọ ala dị oke ọnụ ma ka na-, ma ọ bụrụ na ị chọrọ, Avis ma ọ bụ Europcar nwere itieutom na isi obodo ọdụ. Ugbu a, n’usoro njem njem n’obodo mepere emepe, adịchaghị mma.
A na-ekenye ọtụtụ tagziMaka njem dị mkpirikpi ọ na-adịkarị iwere ụgbọ ala ndị a nwere ọnya nwere agba. Ọ bụrụ na ha enwere onwe ha, ha nwere ike ịkwụsị n'okporo ámá ma ọ bụrụ na ha anaghị aga ebe ị na-aga, nsogbu adịghị ma ha na-aga n'ụzọ ha. N'ihi na ogologo njem i nwere kpakorita udu. Enwere ụgbọ ala? Ee, mana ha abụghị ndị nkịtị dịka tagzi ejikọtara.
Travelga Equatorial Guinea
Tupu njem ọ dị mma ịnwe ọgwụ mgbochi, karịsịa Ọrịa Yellow. I kwesịkwara ịmara banyere diphtheria, tetanus, rubella, polio, Hepatitis A na B, rabies, na ịba ahụ ọkụ. Na ndammana, iku otu ezigbo mkpuchi ahụike ma soro usoro prophylaxis megide ịba nke ga-enwerịrị ọgwụ anwụnta. Mmiri? Kpatụ mmiri anaghị a drinkụ.
N'ịmara ihe a niile, obere akụkọ ihe mere eme, obere ala, obere ajụjụ bara uru, anyị ga-ekwu maka ya ugbu a ihe ịga leta Equatorial Guinea. Ọfọn ya niile amalite na Malabo, isi obodo. N'ebe ọwụwa anyanwụ bụ ọdụ ụgbọ mmiri na obodo ochie ya na ụkpụrụ ụlọ ya nke mere ka katidral ahụ pụta ìhè. N’ebe ọdịda anyanwụ ya bụ obodo ndị mara mma, embasies, ministri na họtel. N'ime etiti enwere ebe ịzụ ahịa, ụlọ ọgbara ọhụụ, ụlọ nri na ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ .ụ.
Malabo dị n’ebe ugwu, n’ụsọ oké osimiri nke agwaetiti Bioko, ọ bụkwa kasị ochie obodo na mba. Njem nlegharị anya na-eto eto na akụnụba nke mmanụ nyere ohere iwu ụlọ ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ, obodo Sipopo nke na-eleba anya na njem azụmahịa.
Ke Malabo bụ Obí Ikpe Ziri Ezi, Obí Onyeisi, Mma Katidral nke Santa Isabel, Odị Neo-Gothic, nke nwere ụlọ elu abụọ dị mita 40, ụlọ ahụ La Gaditana, na Thelọ Theodolite, ma ulo mbu ma site na mmalite nke narị afọ nke iri abụọ, Ebe Nnwere Onwe ma ọ bụ Ebe Omenala nke Spain. Nwere ike ịgbakwunye Museum of Modern Art nke na-ejikọ nka site na Afrịka niile.
La Ogige Bioko, nso nso Cameroon karịa Equatorial Guinea, o nwere oke osimiri, ma ojii ma aja ọcha. O nwekwara oke mmiri ozuzo, savannas na ugwu mgbawa, dịka ọmụmaatụ Pico Basile nke karịrị 3000 mita n'ịdị elu, igwe ojii kpuchie ya niile. Nke a bụ Ogige Ntụrụndụ Pico Basile, ụdị mmiri ozuzo nke ị nwere ike ịwagharị n'ugwu iji nwee ọhụhụ. Enwere njegharị, ọ bụ ezie na elu enweghị ike iru n'ihi na ọ bụ mpaghara ndị agha.
Isi obodo, Malabo, nwere ike ijide gị n'ọrụ ụbọchị ole ma ole karịa, yabụ oge eruola ka ịgagharị. Ọmụmaatụ, Ureca Ọ dị nnọọ na ndịda agwaetiti ahụ ma mara mma. N’ebe a ị ga - ahụ ụdị mbe anọ nke ga - abata n’agbata ọnwa Nọvemba na Febụwarị iji dina akwa ha n’aja. E nwekwara oké ọhịa gburugburu ya Ndagwurugwu Luba ebe primates bi.
E nwekwara obere obodo nwere otu aha, Luba, nwere ọdụ ụgbọ mmiri na-arụsi ọrụ ike nke dị na nsọtụ ndịda nke San Carlos Bay. You nwere ike iri nri ehihie ebe a ka ị na-eme njem ụbọchị n’ụsọ agwaetiti ahụ na ụsọ osimiri ya, Arena Blanca, na-ewu ewu nke ukwuu, yana butterflies ya.
Arena Blanca osimiri bụ ihe mara mma ma ị nwere ike ịhapụ ụgbọ ala gị wee jee ije na ya. Enwere ogwe osisi n'akụkụ ebe a na-adọba ụgbọala ma ha nwere ike ịjuju na Sọnde. Na mpaghara ị nwekwara ike ịga na Echiche Luba, otu n’ime echiche abụọ dị na ụzọ gafere Bioko Island na nke kachasị elu na abụọ. Lee echiche! Nke ọzọ bụ Echiche Moka, nke nwere oke ngosi nke agwaetiti na oke osimiri.
Ọzọ nke bi agwaetiti na Equatorial Guinea bụ Agwaetiti Corisco nke nwere oke osimiri. Obodo a pere mpe, ọ bụ ezie na a na-arụ ọtụtụ ihe owuwu, enwere ụlọ nkwari akụ nke nwere marina na yacht club na ọmarịcha ahịa na bọọdụ njem. N'àgwàetiti ahụ bụ Obodo Fang, obere obere nke a ma ama maka osimiri ya, nke ị nwere ike isi lee Gabon na Elobey Islands. Ga-ahụ ya n’akụkụ Akoga, nke n’aka ya bụ naanị kilomita iri na atọ site na Cogo.
Ọ bụrụ n ’ịnọ na Guinea, ihe ndị masịrị gị na-amasị gị, ya mere nleta ọzọ bụ ugwu Alen, akụ dị oke ọnụ n’akụkụ a nke Africa. Na Ogige Ntụrụndụ Monte Alen Ọ bụ mpaghara nke kilomita 2 nke oke ọhịa na anụ ọhịa n'akụkụ Osimiri Muni, nwere mmiri iyi na ọdọ mmiri, gorillas, chimpanzees, enyí, agụ iyi na ọtụtụ ụmụ anụmanụ Africa. Ọ bụ ebe dị ọkụ ma nwee ntuziaka dị mkpa ka ị ghara ịga naanị gị. Hotellọ nkwari akụ ahụ na-arụbu ebe a adịkwaghị.
Equatorial Guinea Ọ na-enye anyị, dịka ị pụrụ ịhụ, ọtụtụ ọdịdị na akụkọ ihe mere eme. Ọ bụghị mba a haziri ahazi maka njem nleta na ọ naghị eme ka ihe dị mfe ịkwaga naanị, ọbụlagodi ka njọ, ọ bụrụ na ị naghị atụ egwu, ọ bụrụ na ịchọrọ njem, ọ bụrụ na ị na-eme njem n'otu otu ma chọọ imeghe uche gị, ọ bụ ebe ị na-agaghị echezọ ma ọlị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Njem ịga Equatorial Guinea
Ihe ị ga-ahụ na Basel, Switzerland